Kooxo Hubeesan oo Dhac maanta ka geestay Xarun Ganacsi oo kutaala Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho « AYAAMO TV
Kooxo Hubeesan oo Dhac maanta ka geestay Xarun Ganacsi oo kutaala Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho
500 Views Date February 1st, 2014 time 11:56 am
Kooxo Hubeesan aan heebtooda la garan ayaa maanta xiri dharaar cad ah waxa ay dhac u geesteen xarun Ganacsi oo kutaala Suuqa Weyn ee Baraakaha Magaalada Muqdisho.
Kooxaha dhaca geestay ayaa la tilmaamay in ay gaarayeen ilaa Sadax nin oo ku hubeesnaa qoryaha AK-47 sidoo kale watay Gaari yar oo nuuca Caaribka loo yaqaan , ragan ayaana gudaha u galay Xarunta S COMPNY ku leedahay Suuqa Bakaaraha halkaasna dhac ka geestay.
Goob jooge kusugnaa agagaarka Xarunta ganacsi ee dhaca loo geestay ayaa sheegay in labo kamid ah Raga Burcada ah ay xoog ku galeen gudaha xaruntaasi halkaasna ay kasoo qaateen lacago aan wali cadadeyda la heyn.
Kooxaha dhaca geestay ayaana furay Rasaas ay ku ridayeen dad kusoo xoomay gaarigooda ay ku jireen qaar kamid ah Shaqaalaha Cambaniga ganacsi ee la dhacay , Kooxihii dhaca geestay ayaana goobta ka baxsaday sida uu goob jooge kusugan halkaasi ku waramay.
Dhaca loo geesto xarumaha ganacsi ee kuyaala Magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkii dambe aad u yaraa , waxa ayna cabsi badan galisay dhacii maanta kooxaha hubeesan ka geesteen Suuqa Weyn ee Bakaaraha ganacsatada suuqaasi ku ganacsada.